Hira teny frantsay : 66 ireo niatrika ny fifaninanana -
AccueilVaovao SamihafaHira teny frantsay : 66 ireo niatrika ny fifaninanana
Hira teny frantsay : 66 ireo niatrika ny fifaninanana
Andiany faha-7. Notanterahina ny zoma lasa teo ny fihainoana voalohany ho an’ilay fifaninanana mihira amin’ny teny frantsay karakarain’ny Alliance française. 66 ireo nandray anjara tamin’izany, ka ny 6 no tao anatin’ny sokajin’ny famoronana, ary 60 kosa ho an’ireo nindrana hirana mpanakanto hafa. Samy niezaka naneho ny talentany eo amin’ny fahaizany mihira ary indrindra ny fahafehezana ny teny frantsay ireo mpandray anjara. Anisan’ny hitsarana azy ireo rahateo izany.
Ny 26 aogositra izao no hiatrika ny dingan’ny manasa-dalana ireo tafakatra, ary ny 3 septambra 2018 kosa no famaranana ho an’ny eto Antananarivo.
Ny famaranana amin’io fifaninanana hira teny frantsay eo amin’ny sehatra nasionaly kosa dia hotanterahina ny alahady 23 septambra. Hiatrika izany ireo solontena avy amin’ny alliance française manerana an’i Madagasikara. Tsiahivina, fa fivahinianana any Frantsa ny loka voalohany ho an’ny sokajin’ny famoronana, ary fivahinianana amin’ny toeram-pialantsasatra iray eto Madagasikara kosa ho an’ireo mindrana hirana mpanakanto efa malaza.
Tsiahivina fa isan’ny mampiavaka ity andiany faha-7 ity ny fisian’ny ray mpiahy ny fifaninanana, izay ahitana an’i Sébastien Folin, mpanolotra fandaharana.